जीवनशैली/स्वास्थ्य – Eranimahal
के भनिन्छ भने, अक्सर दम्पतीको खटपट ओछ्यानबाट सुरु हुन्छ । फिका यौन-जीवनले दम्पतीको सम्बन्ध सुमधुर रहँदैन । त्यसैले दाम्पत्य सम्बन्धमा यौनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसो त यौन जीवन रोमाञ्चक
शरीर माेटाे भयाे : यसरी घटाउन सकिन्छ तौल
सक्रिय जीवन अपनाउनु सधैं सक्रिय जीवनयापन गर्नुपर्छ। यसकोलागि विविध प्रकारका शारीरिक क्रियाकलाप र व्यायाम हुन जरुरी छ। सन्तुलित भोजन खानु मोटो भयो भन्दैमा खाना खानै छोड्नु बानी गर्नुहुँदैन। विशेषगरी,दैनिक तीन
आँप मस्तिष्क र हड्डीका लागि बढी फाइदाजनक
काठमाडौं । फलफूलको राजा आँप बच्चादेखि बुढासम्मका व्यक्तिका लागि मनपर्ने फल हो । आँप स्वादमा मात्र होइन पोषक तत्वको भण्डार पनि हो । आँपको सेवनले धेरै प्रकारका रोगहरुबाट पनि बच्न
कसरी खाने पानी, पिउने सही समय कुन हो ?
काठमाडौं एजेन्सी- दाँत ब्रस गर्नुभन्दा पहिले खाली पेटमा २ गिलास पानी पिउनुपर्छ । त्यसपछि ब्रस गरिसकेपछि ४५ मिनेटपछि पानी पिउनुपर्छ । त्यसपछि सामान्य खाना खान सकिन्छ । पानी पिउँदा विस्तारै
यि हुन् कलेजाे विग्रिएकाे संकेत : कसरी पत्ता लगाउने ?
एजेन्सी- कलेजोमा अनावश्यक बोसो जम्मा हुने समस्यालाई ‘फ्याट्टी लिबर डिसिज’ भनिन्छ । कलेजोमा बोसो बढ्नु निकै खतरनाक मानिन्छ । कलेजोमा समस्या आएको विभिन्न संकेतहरु देखिन्छन् । लामो समयसम्म कलेजोमा समस्या
मानसिक तनाव कम गर्न के गर्ने ?
एजेन्सी । जीवनमा मानिसहरुका थुप्रै मानसिक र शारीरिक समस्याहरु आइपर्छन् । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसका कारण भएको लकडाउन र भाइरसको महामारीले विश्वभर नै मानिसहरु तनाव झेलिरहेका छन् । तनावकै कारण
स्वस्थ र तन्दरुस्त रहनका लागि दैनिक यी पाँच चिज खानुहोस्
काठमाडौं एजेन्सी- आजकाल स्वास्थ्य विज्ञले मानिसहरुलाई डाइटमा सुपरफूड समावेश गर्न सल्लाह दिन्छन् । तर सुपरफुड भन्ने बित्तिकै मानिसहरुको मनमा यस्ता खानेकुरा महँगा होलान् वा निकै मुश्किलले भेटिने खानेकुरा होलान् भन्ने
उत्कृष्ट यौन जीवनका लागि के खाने, के नखाने ?
काठमाडौं एजेन्सी- पार्टनरबीच सम्बन्ध बलियो बनाइराख्नका लागि यौनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यौन जीवनलाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि मानिसहरु विभिन्न प्रकारको तरिका अपनाउने गर्छन् । तर के तपाईंलाई खानपिनले पनि यौन
तौल घटाउन चाहानुहुन्छ ? यी ४ चीज खानुस्
एजेन्सी – तौल कम गर्न त्यति सजिलो छैन । तर शरीरमा अनावश्यक मासु लाग्नबाट बच्न भने सही खाना र नियमित व्यायाम गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ । तर, केही आयुर्वेदिक सुपर
पाल्पामा कुल कोरोना संक्रमितमध्ये महिला कति ?
पाल्पा – पाल्पामा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्यामध्ये २५ प्रतिशत महिला रहेका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका अनुसार मंगलबारसम्म जिल्लामा १ हजार ५ सय ७८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा ३
पाल्पामा थप २१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
पाल्पा – पाल्पामा थप २१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको विवरणमा बिहीबार र शुक्रबार गरी दुई दिनमा १५ पुरुष र ६ महिलामा
चिसो मौसममा बिहानै खाली पेटमा मनतातो पानी पिउँनुहोस्, हुनेछन् यस्ता फाइदा
पाल्पा – हामीले स्वास्थ्यका लागि पानी पिउनु अत्यन्त जरूरी छ । यसले शरीरको विषालु पदार्थ बाहिर निकाल्छ र रोगहरू हटाइदिन्छ । चिसो मौसममा मनतातो पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि अझ लाभदायक
पाल्पाको कोरोना अपडेट : आईतबार १५ जना संक्रमित थपिए, ३८ जना निको भए
पाल्पा – आईतबार पाल्पामा कोरोना भाइरसका १५ जना संक्रमित थपिएका छन् । थपिएका संक्रमितमध्ये ९ जना पुरुष र ६ महिला छन् । स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका अनुसार तानसेन नगरपालिकाभित्र ६ जना
पाल्पामा बिहीवार थप १५ जनामा कोरोना पुष्टि
पाल्पा – पाल्पामा थप १५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । बिहीवार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ८ पुरुष र ७ महिलामा कोरोना पुष्टि भएको हो । स्वास्थ्य कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार